Rindrambaiko PDF 5 maimaim-poana hanovana ny rakitrao
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Rindrambaiko PDF 5 maimaim-poana hanovana ny rakitrao
Ny ankamaroan'ny orinasa sy orinasa dia maniry ny antontan-taratasy ofisialiny manomboka amin'ny antontan-taratasy, lahatsoratra na boky torolàlana vita amin'ny Portable Document Format (PDF). Tsy toy ny endrika antontan-taratasy hafa, ny PDF dia tsy mamela toerana ho an'ny fanovana tsy ara-dalàna ka hahatonga azy io ho azo antoka kokoa.
Rehefa mitady rindrambaiko PDF tonga lafatra dia mila mijery ireo fitaovana natolotry ny rindrambaiko. Ireo fitaovana ireo dia misy ny fahaizana mameno endrika, manampy sary, lahatsoratra, rohy, na sary mihitsy aza. Ny ankamaroan'ny rindrambaiko dia manana endrika mitovy aminy nefa koa samy manana ny mampiavaka azy.
Ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hahafantatra ny sasany amin'ireo rindrambaiko PDF maimaimpoana azonao ampiasaina hanovana ireo antontan-taratasinao araka ny resahina etsy ambany:
Lua PDF converter dia tranonkala mpanova PDF maimaimpoana maimaimpoana amin'ny tranonkala izay tsy mila fisintomana na fidirana. Afaka miova ny mpampiasa PDF mankany DOC, Excel mankany PDF, ary endrika hafa mitovy amin'izany amin'ny PDF izay misy PowerPoint Presentation (PPT), Portable Graphics Format (PNG), Joint Photographic Group Expert (JPG) ary Hypertext Markup Language (HTML). Ny tranokala dia azo ampiasaina hanambatra sy hanindry ireo rakitra PDF. Lua PDF converter dia mora ampiasaina satria ny fiasa rehetra dia misy ao amin'ny pejy fandraisana.
Mba hamadihana antontan-taratasy dia afaka mampakatra ny antontan-taratasy amin'ny mpizara mpanova Lua PDF ny tonian-dahatsoratra na misintona mora foana ilay rakitra hivadika ho safidy tianao indrindra. Ny mpanova Lua PDF dia mifanaraka amin'ny fitaovana rehetra. Mety ho fatiantoka ho an'ireo manana antontan-taratasy lehibe kokoa noho ny 5MB anefa izany satria voafetra ihany ny famadihana rakitra izay latsaky ny 5MB ny habeny.
Ny programa dia misy dikan-tserasera sy an-tserasera (birao) izay midika fa tsy mila maka ilay programa ianao. Izy io dia manana asa mihoatra ny 40 izay ahitana fitaovana sonia, pejy banga, sary ary fampidirana endrika.
Misy ihany anefa ny tsy fitoviana lehibe eo amin'ny kinova ivelan'ny birao sy ny birao izay ahafahan'ny mpamoaka lahatsoratra manampy PDF amin'ny alàlan'ny Uniform Rescue Locator (URL) sy ny rohy miaraka amin'ilay kinova an-tserasera.
Ny Sejda PDF Editor dia tsy afaka manitsy PDF telo isan'ora fotsiny miaraka amin'ny isan'ny pejy voafetra ho latsaky ny 200 sy antontan-taratasy tsy lehibe noho ny 50 MB. Ny programa dia mamafa ihany koa ny rakitra rehetra aorian'ny adiny roa.
Ny kinova an-tserasera an'ny Sejda PDF Editor dia miasa amin'ny rafitra miasa rehetra raha toa kosa ny kinova amin'ny birao dia mifanaraka amin'ny macOS, Windows, ary Linux.
Ny PDFescape dia rindrambaiko iray hafa izay mora ampiasaina satria sady misy an-tserasera no misy ny santionany amin'ny birao. Zava-dehibe ny manamarika fa tsy misy maimaim-poana ny kinova desktop. Ireo fitaovana maimaim-poana amin'ny kinova an-tserasera dia tonian-dahatsoratra PDF, mpamaky, mpamorona endrika, mpameno, ary fanamarihana toy ny fanasongadinana sy naoty kely. Ny programa dia tsy manana mari-drano ary tsy mila kaonty na fidirana na fotoana fitsapana.
Miaraka amin'ity programa ity, ny editor dia afaka manamboatra ny lahatsoratra amin'ny fombany sy ny karazany tiany, mampiditra sonia, manampy mora foana ny lahatsoratra, ny tsipika, ny endrika, ny zana-tsipìka, ny sary ary ny mamoaka, mihodina ary manampy pejy hamafa ary mampiditra rohy URL azo tsindriana amin'ny PDF antontan-taratasy. Miaraka amin'ilay programa dia tsy afaka manova sary efa nisy ny olona na manova lahatsoratra ary maimaimpoana fotsiny ho an'ireo antontan-taratasy latsaky ny 10 MB na pejy 100. Ny kinova an-tserasera dia mifanaraka amin'ny rafitra fiasa rehetra raha toa kosa ny kinova Desktop dia afaka mihazakazaka amin'ny Windows 7 sy ambony.
Rindrambaiko PDF maimaimpoana ity izay ahafahan'ny tonian-dahatsoratra manentsina PDF, mamadika PDF mankany sy avy amin'ny Word DOC, Excel DOC, PPT, PNG, JPG, ary HTML nefa tsy mila kaonty mpampiasa akory.
Afaka mampiseho, manonta ary mizara PDF an-tserasera ny olona iray, mampiditra isa isa, manala pejy iray na maromaro, manodina pejy iray na rehetra, manangona antontan-taratasy PDF maro, mamoaka pejy avy ao amin'ny PDF ary mamorona sonia. Afaka manampy sy manaisotra ny teny miafina fisie PDF koa ny olona. Ny rindrambaiko dia voafetra amin'ny PDF roa isan'andro fotsiny ary tsy mamela ny fanovana ny lahatsoratra efa misy, ary mifanaraka amin'ny rafitra miasa rehetra ao anatin'izany ny IOS, Windows, ary Android
Ny programa dia manome ny fitaovana fanovana fototra rehetra sy ny takiana amin'ny rakitra PDF misy ny fanitsiana lahatsoratra, manampy sary ary koa rohy. Toy ny ao anaty antontan-taratasin-teny iray, ny mpampanonta dia afaka mampiditra ireo pejy afovoany, footers ary lohateny.
Ny rindrambaiko dia mamela ny editera hamorona pejy, mampiditra, manodina ary mamafa pejy PDF.
Ny kinova maimaim-poana kosa dia misy mari-drano amin'ny pejy rehetra amin'ny rakitra PDF na eo aza ny endri-javatra sy fitaovana mahavariana. Ny programa dia tohanan'ny rafitra fiasan'ny macOS, iOS, Windows, ary Android.